WARAYSI : Siciid Deni oo ka hadlay shirka Fashilmay iyo War kasoo baxay Jubbaland iyo Puntland | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
WARAYSI : Siciid Deni oo ka hadlay shirka Fashilmay iyo War kasoo baxay Jubbaland iyo Puntland
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo wareysi siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in qoraalka iyo muuqaalka dowladda sii deysay uu ahaa wax horay u diyaarsanaa, isagoo tilmaamay inay cadahay in dowladda aysan rabin shirka looga hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa
Dhinaca kale War kasoo baxay Puntland iyo Jubbaland ayaa looga hadlay Shirka Doorashada ee Fashilmay.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=42066
22 Comments for “WARAYSI : Siciid Deni oo ka hadlay shirka Fashilmay iyo War kasoo baxay Jubbaland iyo Puntland”
April 7, 2021 - 8:52 pm
Warka oo dhanka dhegayso idaacada Halgan!kkk
April 7, 2021 - 9:00 pm
Anigu markaan ninkaas dhinac kasta ka eegay waxaan u arkay inuu hordhac u yahay yeey cusub oo inagu soo wajahan.
Ninkan waa in god dheer lagu ridaa si loogu quus qaato. Sidaas ayaa xalka dalku ku jiraa boowe.
Madaxwayne Dani is a true statesman hadalkiisa oo qudha ayaad ka garan kartaa inuu hogaamiye yahay unlike mr aarmaajo who can hardly give any meaningful speech.
Dani can talk the talk and walk the walk
April 7, 2021 - 9:44 pm
Horaan idinkugu sheegay
Macangag Farmaajo waa masiibo
Loo soo direy Somalia
gaar ahaan Dhulka Hawiye
Ceeb iyo Taariikh xumadiis adeerkiis
ayaa asna u dambeyn
* SAD KAMA KACE
April 7, 2021 - 11:05 pm
Jid iyo Jiho diidayaal.
Duf kubaxa waxay ku leeyihiin waxaan u mahad celinatnaa BEESHA CAALAMKA!!!! Soomaalidii kalena way la dagaalamayaan Kenya iyo Emirayes iyo cadow shisheye.
Aanse mid idiin sheego Dowladda Soomaalia انشاء الله horay bay u soconaysaa loona joojin maayo dabadhilif, qabyaaladiise iyo dhamaan inta sida diciifka ah u fekeraysa sida ((DABSHID)) AKA ciidankii Axadda ee 1991.
Guulayso Mudane his excellence Mr Farmaajo iyo Mr Rooble iyo Mr Finish iyo 3 mujaahid ee H/shabeele K/Galbeed iyo G/Mudug iyo dhamaan Soomaalida Xalaaaha ah.
April 8, 2021 - 12:21 am
Somaliya xalkeedu maanta waa dagaal ooge farmaajo oo xamar iskaga baxa hadii kale waxa iman doonta xabaalo wadareedyo hor leh ilahay waxaan ka baryayaa inaan dagaal danbe dhicine si nabada inagu dhaafiyo ninkan macangega ah
April 8, 2021 - 12:22 am
War waa maxay baroortu , calaacal iyo cabaad waxba kuuma keenaan aduun hawli kama dhamaato.waqtigii qaswadayaashu waa soo dhamaaday,xalane I geeya iyo beesha caalamku hana soo faragaliso arimaha doorashadana hala wareegto,gudbe maalnahoodii,waxaa yimid madax adagoo maareenaaya howshoo,aan la moodi karinoo,maamulaya hawlaha,looma meerin karinoo,mayalkoodu adag yahay.
April 8, 2021 - 12:29 am
Ina farmaajo waa dikteedar donaya inuu dalkan qabsado lakiin ma awoodo oo waa
Inan la yaal USC magan u ah wuxuu keliya rabaa inuu damo iftiinka muqdisho ka
Shidmayey 20 kii sano ee ugu danbeeyey nin ciilan eey dheheen cidaha wardiyeey
April 8, 2021 - 12:38 am
Waligaa gacanta makuu soo taagtey
Saqiir ay Baddii Kismaayo qaadey
Ar i qabo, i qabo
War ninka naga qabta
War dadka iyo Dalka badbaadiya
April 8, 2021 - 12:47 am
Saqiirkii ina farmaajo ahaa mantu is toogtay markii DUBE dhawaqay muuqal hore
Loo sii dirayey ayuu soo turay kkkk kuye shirkii waa fashimay caawa isaga iyo
Ilma gareen waxaa lagu yiri madama kismayo iyo garowe jogan shirka cidii baxda
Waa QASWADEYAL hada dhawaqi dubaa laga shalayey kkk war wuxu kursi jecla
Ma uur ku har buu ahaa
April 8, 2021 - 1:03 am
Horaan u sheegay in Farmaajo rabin Soomaaliya oo Doorasho ka dhacdo ! Jaale Farmaajo dhaqan uma laha in uu si nabad ah oo Democratic ah Kursiga dhexda Soo dhigo si Doorasho wada ogol ah loo aado.
Aaqirkiina waxay tagi doontaa in jeegada la qabto sidii Oday Cabdulaahi Yusuf kii Reer Puntland.
Inta taa ka horaysana sheekadu waa kaalay ila mayrayso Shimbirayahoow Heesa.
April 8, 2021 - 1:17 am
labada Parliament ee Xamar
Madaxweynahii hore ee Somalia
Rasalwasaarihii hore ee Dowladdii hore ee
Waxaa ka Wakiil ah
Mr Deni iyo Axmed Cadde Garmadoobe
Sanadkaa ayagaa Somalia ka saari
Macangag iyo EEYAHA UU WATO EE ILMO GAREEN
* Taariikhda ayaa xusidoonto
Mr Deni iyo Mr Axmed Cadde Garmadoobe
Yes waala arkey nin amaan sameeyo
Iyo kii loo sameeyey oo hilmaamo
Lkn Reer Muqdisho waligood ma hilmaaman
Taariikhaha la soo marey
Waliba waxaan qireynaa wuxuun kasto
Oo aan u heysay C/llaahi Yuusuf waxaa
MEYRAY MR DENI,
siduu balan qaadey shirkii uu Doorashada
PUNTLAND ku doonahayey.
,* Sadka kama Kace waa Warlord
April 8, 2021 - 1:54 am
April 7, 2021 – 7:09 pm
Farmajo waa hore ayuu Mursal 12 milyan u dhiibay si 2 sano loogu daro.
Deni weli wax buu qarinayaa oo ma sheegin in Warlordka soo daahay ee Farmaajo laga fujin waayey arinta Gedo si cadna u sheegay inuu doonayo maamul gooniya oo JL ka madax bannaan.
Deni wuxuu caddeeyey in xitaa Dhawaaqa Dubbe ee maanta aha mid lasii record gareeyey oo diyaarsanaa.
“Nin meeli ka caddahay meeli ka madow”
April 8, 2021 - 2:11 am
Farmaajo:- Waxaan nahay dal xor ah oo arrimihiisa gudaha, masiirka dalkiisa, iyo aayihiisa isagu u madax bannaan loomana baahna in ay beel caalam iyo cid kale soo fara galiso…
Dani:- War mayee xor ma nihin, dalka waa nalala leeyahay, waa in ay beesha caalamku talada wax ku yeelataa oo ay go`aammada ugu danbeeya iyadu goysaa!!!.
Soomaalidu ma indha la`a, ma ahan waagii Radio BBC kaliya warka laga qaadan jiray, Daniyoow wax walba lagugu day lagaana samir, dal bur buraya iyo dib loo noqonayo midna ma jiraan… Adigoo ah Guddoomiye gobol un baa is mooday wax aadan ahayn, waadna ka shallaayi doontaa aakhirka…
Kursiga uga deg Farmaajoow Xasan shiikh ku lahaa.. War bal waallidan oo kale iyo yaabkan iyo amakaaggan ma aragteen?…
April 8, 2021 - 5:18 am
HADAY SEEDINIMO DOOR AHAYD DACAY NIJAASEEYE
HALAYS DILO DAGAAL WAXAAN AHAYN DAAWO LAGU WAAYE Sayid Maxamed
Maadaama aan la Kala garqqadaneyn, maadaama iska daa kuwa xukunka isku haya e, inteena Kalshaale Ku kaftanta aanan Kala garqadaneyn, arrinku waa Allow ninkii roon reerka u reeb. Halakala waranjiito ninkii cabaad laga maqlana Soomaali kama dhalan.
April 8, 2021 - 7:53 am
Dawladu waxay haysataa mandate aan muddo lahayn.
Parliamentkuna waa la mid.
Go’aanka u dambeeyana Parliamentka ayaa iskale.
Deni hayska biqleeyo.
Waxaa la sheegay in Deni aad uga cadhaysanyahay laba arimood…
1 Cumar Filish oo ku soo biiray saxeexayaasha doorashada oo Hawiye ka socda,misana wata 13 Xildhibaan.
2 Maamuladii Hawiye oo diiday inay la saftaan Garoowe.
Kaaga darane waxay la safteen Baydabo.
Deni waxaa la safan Axmed Madoobe oo tiisiiba u liita.
Ragii ma adaa ka hadhay kkkkkk
Waar yaa Harageedii nagaga caliya.
April 8, 2021 - 8:26 am
Ina farmaajo iyo guulwadeyashii oo ku fashilmay inqilaabkii ay domnayeen kkkkkk
Hadaad isku qalado 1969 wixii dhacay iyo 2021 ceeb ayaa loo taga jajusiintii
INA DAFLE ku beeray muqdisho oo jilbaha dhulka loo dhigay ninkii sugayoow
golihii aare waa sara kici waayey
April 8, 2021 - 9:54 am
Aniga LOP intaan ku celin ninkii dhasftay.
Talo xumo dambe cidna laga yeelimaayo, doorasho qabo xalaal ah, waaba intaas oo aad ku guulaystee. ✌️
Buffalo ku noqo, daanyeer aqli xun, meeshii sixi lahaa qaladkii Daarood iyo Mareexaan galeen ayuu meeshii kasii wadaa..Geeljirta la taliyaasha u ah Farmaajo waa in dalka laga badbaadiyo.🇸🇴
Hawiye waa isdhiibay oo hub iyo ciidan Farmaajo ula tagaan ma haystaan.
Wuxuu ka dhigay qaar laaluushay, qaar been u sheegay in Somalia oo dhan Xamar hoos keenin.
Qaar u hanjabay iyo magaalada lacagta taal idinka ayaa leh oo ilaalashada oo ila shaqeeya.
Aryaa ninkaan yow dukaanka iyo guriga iga gubin, xaa mahaan Daarood ka yaalo, markay gubatuu boorsadiisa ka qaadan.
Xoolahay macaansahayaan wawse maanli’i. kkkkkkkk
Dal aan nidaam iyo sharci kalahaga lahayn, mar ay noqotoba markale waa la isku faagan.
Belo madax la qabto ayey leedahay ee dabo la qabto malaha.
Calaashaan ka hortay ee kadabatag malaha.
Anigu ma fahmin waxa Farmaajo gobolada Daarood burburintooda ka helayo!!!
Good lucky Maryooley, awalba aniga iyo ciyaalkayga qabowga Europe iskala qabsanay.✌️🇸🇴
April 8, 2021 - 10:31 am
SACA GEESAHA WEYN
Lo’ada ayuu ka saara Harka Geedka
” Asna ma harsadee wuxuu ka dabo tagaa”
Hadda Macangag Farmaajow
Sharaftii Soomaaliyeed waxaad
KA SAARTEY VILLA XORIYO
” Adiguna kumaadan harine
waxaad uga dabo tagtey AFISOONI”
Haddana haka SAARIN Afisooni”
Oo HA GEYN KAMPALA UGANDA
– Waxaa dhahey Madaxweynahii
Doorashada Qabtey Xilkana ku wareejiyey
DICTATOR SOO DAAHEY.
April 8, 2021 - 10:35 am
Labo Dubbe BURIS oo is ka shifey
– Dubbihii shirka joogey
Iyo Video la sii diyaariyey ee DUBBE hii YEERAY
JEEBSIIB QAAWAN AYAA KU DHACEY
MAAMULKII BANAADIR STATE OF USC
Haddii la diido waydin kaas…daanyeer badow ah.